Ardayda soomaaliyeed ee pakistan oo ka Cabanaya safiirada Khadija Almakhzumi – Radio Daljir
Ardayda soomaaliyeed ee pakistan oo ka Cabanaya safiirada Khadija Almakhzumi
Febraayo 26, 2018 9:12 b 0
“Safaarada dani kaa soo gashay waa habaarka ugu badan ee dadka soomaaliyeed ee ku
dhaqan Pakistan isku habaaraan”.
Waxaa ku nool dalka Pakistan soomali ku dhaw 1200 oo qof, oo iskugu jira qoysas iyo Arday iyo dhawr qof oo ganacsato ah, Ardayda wadankan ku dhaqan waxay tiradoodu u dhaxaysaa 800
ilaa 1000 arday, oo intooda badan dhigta jaamacadaha dawliga ah iyo kuwa maxaliga ah ba, tirade ardaydu waa xiligii ay ugu hooseeyeen laga soo bilaabo horaantii 1970kii ilaa maanta.
Sababta waxaa loo aanaynayaa Marwo Khadiija Al Makhsumi safiirada soomaaliyeed ee dalka Pakistan, oo si toosa uga qayb qaadatay hoos u dhaca tirada aradayda ka dib markii ay ku soo
rogtay shuruudo intooda badan niyad jabinaya muwaadinka wax barasho u jooga iyo ka u soo socdaba.
Waxaa in mudo ah isa soo tarayay cabashooyin ka dhan ah safiirada iyo safaarada hawlgakooda, oo ku aadanaa adeeg xumo, ixtiraam daro, musuq maasuq, iyo waliba kala faquuqida ardayda iyo guud ahaan jaaliyada. Safiiradu waxay si toosa uga qayb qaadatay inay samayso foolgari dal ku jooga ah oo loo gaystay qaar ka mida ardayda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan.
Safiiradu waxay sidoo kale hab sharci darro ah ula dhaqantay diblomaasiyiinta la shaqeeya oo ay awoodii sharcigu siiyay ka qaaday iyada oo u xil saartay dad aan u qalmin loona dooran hawlaha diblamaasiyiinta loo igmaday.
Waxay sidoo lumisay kalsoonida ay ku qabeen hayaddaha dawliga ah ee waddanka martida looyahay, taasi oo abuurtay inaan la tix galinin waraaqa ka soo baxa xafiiska safaarada laguna kalsoonayn kadib markii ay arkeen is daba marrin badan oo ka jirta xafiiska safaarada.
Waxay safiiradu intaas ku darsatay inay cagajuglayn ugu darto muwaadiniin soomaaliyeed iyo masuuliyiinta safaaradaba in ay masaafurin doonto hadiiba ay isku dayaan in ay ka hor yimaadaan musuq maasuqa amaba ka hadlaan dhibta lagu hayo shacabka iyo diblomaasiyiinta ka howlgala safaarada.
Dacwaddo badan oo ka dhan ah safiirada ayaa gaaray dawlada soomaaliya gaar ahaan xafiiska arrimaha dibada, guddiga arrimaha dibada ee baarlamanka fadaralka soomaaliya, hase yeeshee ilaa hada wax natiijo ah kama soo bixin, walina dhibta lagu hayo diblamaasiinta, jaaliyada iyo ardayda soomaaliyeedba way taagan wayna soo badanaysaa maalinba maalinta ka danbaysa.
Howlgalkii badbaadinta doonidi ganacsi ee Boosaso oo gabagaba ah (dhegayso)
QM oo kordhinaysa Tageerada Somaaliya